12 Iindawo zeMidlalo eziBalaseleyo kwiLizwe | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 12 Iindawo zeMidlalo eziBalaseleyo kwiLizwe
Ukusuka kwindawo yemidlalo yeqonga yamandulo ephantsi kweenkwenkwezi ukuya kwiiholo ezimangalisayo nezinhle, la 12 Iindawo ezilungileyo zomculo kwihlabathi zilungile ukuba uyafuna ngokwenene ukufumana ezona konsathi zibalaseleyo. Shanghai, Berlin, London, kwaye i-Itali zimbalwa yezona ndawo zibalaseleyo zokonwabela ikonsathi yakho yomculo elandelayo.
1. Iindawo zeMidlalo eziBalaseleyo kwiLizwe: IRoyal Albert Hall eLondon
Kuvulwe enye yeenkosikazi ezaziwa kakhulu kwihlabathi, U-Queen Victoria, iRoyal Albert Hall eLondon, yenye yeendawo zomculo ezidumileyo kwihlabathi. Njengoko ungenelela uya kuvuma kwangoko ukuba bobukumkani ngokwenene. Ukusuka kwinto yokuhombisa ukuya kwiatmosfera xa izibane zicinyiwe, ikhonsathi apha iya kukunika i-goosebumps.
ukusukela 1871 abalandeli bomculo bazo zonke izimbo, ukuya kwiRoyal Albert Hall 365 iintsuku. ke, nokuba uyijazz, Iliwa, okanye umlandeli womculo weklasikhi, Ikonsathi yomculo ephilayo eRoyal Albert Hall ngamava ongafuni kuphoswa xa useLondon. IRoyal Albert Hall iseMazantsi eKensington, kwaye ifikeleleka ngokulula ngombhobho.
2. Indawo ye-O2 eLondon
Indawo yesibini efanelekileyo yomculo kwindawo yethu 12 Iindawo ezilungileyo zomculo emhlabeni yiO2 Arena eLondon. Yenye yeendawo ezinkulu zokudlala umculo eYurophu, kunye nehlabathi, negumbi le 20,000 abaphulaphuli. Ngaphezu, ngo 2008 Igqithile intengiso yamatikiti eMadison Square Garden.
INkosana, ICirque Du Soleil, UAlicia Keys, kunye neeBrit Awards, ziziganeko ezimbalwa zomculo onokuzonwabela kwiO2 Arena. Uya kudinga ukuhamba ngaphandle kweziko laseLondon, ukuya eGreenwich, kodwa ngowona mculo mhle, kufanelekile ngokupheleleyo ukuba nobunzima.
3. Iindawo zeMidlalo eziBalaseleyo kwiLizwe: IMusikverein eVienna, Ostriya
Yenziwe njengebhokisi yomculo efanelekileyo, umongo wobuhle, i Wiener Musikverein, okanye umbutho womculo, Yeyona ndawo yokugqibela yomculo eYurophu. Ekhaya kwi-philharmonics yaseViennese, iholo lomculo lenzelwe kwisitayile setempile yakudala yaseYurophu, kunye neFresco yeApollo eluphahleni.
364 iintsuku ngonyaka, abathandi bomculo kwihlabathi liphela, yiya eVienna ukuze ufumane amava omculo angenakulibaleka. Enkosi kuyilo, i-acoustics, umculo, indawo, kunye nomoya, iMusikverein ingaphezulu kwe 12 Iindawo ezilungileyo zomculo kwihlabathi.
4. IVerona Arena e-Itali
the 12 Iindawo ezilungileyo zomculo kwihlabathi ngokulula kufuneka zibonise eyona ndawo intle yokudlala imidlalo ye-opera. IVerona Arena yakhiwa ngenkulungwane yokuqala, kwaye nanamhlanje uya kuyifumana imi ngxi, kunye nokubamba abalandeli be-opera kwihlabathi liphela.
IVerona Arena yindawo yemidlalo yelitye evulekileyo, kwaye iindonga zayo ziya kukubalisela amabali omdlalo wokulwa kwaye uhlebeze amazwi eqela lomculo wepop. Ubume be-elliptical bubeka ibala laseVerona njengenye yeendawo eziphambili e-Italiya kwikonsathi yomculo ephilayo. I-acoustics, indawo ikhanyisile ebusuku, yenza enye yeendawo ezikhethekileyo zomculo eYurophu.
5. IZiko leLizwe lezoBugcisa boBugcisa eBeijing, China
Ubume beqanda, taka iqhekeza, Iziko likazwelonke lobugcisa obenziwayo sesinye sezakhiwo ezinomtsalane eBeijing. Ukongeza kwifom ekhethekileyo yeziko, kukho ichibi lokuzenzela elijikelezileyo.
Iziko lesizwe lobugcisa bokwenza yeyona ndawo ifanelekileyo yokonwabela i-opera kunye neekonsathi ezihlala e-China. kunjalo, ukuba ukhetha umculo womculo waseTshayina, emva koko iholo yekhonsathi yeyona ndawo ifanelekileyo.
6. Iindawo zeMidlalo eziBalaseleyo kwiLizwe: Indawo ye-Nimes eFrance
Eyona midlalo yeqonga yamandulo yaseRoma ingabamba inani eliveleleyo 24,000 abathandi bomculo. Indawo yomculo emangalisayo itsala amawaka abatyeleli minyaka le, kweminye yeminyhadala yomculo eFrance.
Ukusuka kwipopu yokukhaba ngoku ukuya kuHans Zimmer, iminyhadala yomculo kwi-Arena yeNimes ayinakulibaleka. Ngeendonga ezikhanyisiweyo ngezibane ezinemibala ebusuku, iinkqubo zesandi zivuliwe – Ikhonsathi apha iyonwabisa ngokwenene.
EParis ukuya eNimes ngoLoliwe
IMontpellier ukuya eNimes ngoLoliwe
IMarseille ukuya eNimes ngoLoliwe
Ndonwabile kuNimes ngoLoliwe
Ifunyanwa kwi-Olimpiki Park kwi Iqela lesixeko saseBerlin, iWaldbuhne yindawo yemidlalo evulekileyo. ijem yepheli, i-philharmonic yaseBerlin, kunye no-Taylor Swift bambalwa kuphela amagcisa anika amakhonsathi kwindawo enkulu yomculo.
IWaldbuhne yaqala ukwakhiwa ukulungiselela imidlalo yeOlimpiki 1934, kodwa ukusukela ngoko uye waba yenye ye 12 Iindawo ezilungileyo zomculo eJamani, kunye nehlabathi. Unokuba ngomnye wethamsanqa 20,000 abantu abazimase ukudlala umculo, ingqongwe ngamahlathi. Indawo yomculo omnandi ibibambe iikonsathi ezininzi ze-epic kule minyaka idlulileyo, ke unokuba yinxalenye yembali yomculo kumnyhadala omkhulu womculo eJamani.
8. Yuyintang E Shanghai, China
Wethu 12 Uluhlu lweendawo ezilungileyo zomculo aluyi kuzaliswa kunye neklabhu yomculo engaphantsi komhlaba eChina. IYuyintang eShanghai ayinkulu njengezinye iindawo zomculo emhlabeni, kodwa yenye yezona zibalaseleyo.
Isondele, kunye nohlobo oluthile, ke ubusuku bobumnandi bemculo. Abalandeli beRock abavela kwihlabathi liphela, babe neklabhu yaseYuyintang kwezona klabhu zabo zerock zibalaseleyo zokugqibela 10 iminyaka. ngoko ke, isenokungabi nayo imbonakalo yangaphandle enomdla, kodwa izandi kunye neentshukumo ziyakwenza ungxame.
9. Iindawo zeMidlalo eziBalaseleyo kwiLizwe: IFelsenreitschule eSalzburg, Ostriya
Xa ubhukisha itikiti le- Umnyhadala waseSalzburg, apho badubule khona Izandi zoMculo – unokuqiniseka ukuba le ndawo yomculo iyamangalisa. the IFelsenreitschule yindawo yomculo eyilelwe ngebhari, nge 96 Iibhodi emva kweqonga.
Ngexesha lomculo, ii-arcades ezibiyelweyo zikhanyisiwe ngemibala, ukutsala abaphulaphuli nangakumbi. Nokuba ukhetha ntoni na kwezomculo, umboniso eOstriya UFelsenreitschule ngumsitho wazo zonke izivamvo – ngqo ukuba umculo ufanele ukwenza njani kwaye uchaphazele.
10. Ithiyetha yamandulo eTaormina, ElamaTaliyane
Ukujongana nonxweme lweCalabrian, Ithiyetha yamandulo eTaormina yakhiwa ngamaGrike malunga ne-3 century BC. Injongo yemidlalo yeqonga emangazayo yayiyimidlalo emnandi kakhulu.
Ngeembono ezimangalisayo zolwandle kunye namazwe, uyakufumana le yenye yezona ndawo ndawo zomculo zoyikekayo kwihlabathi. ngoko ke, igumbi leokhestra, ukuwina, iimvumi, Uya kubona ukuba le midlalo yeqonga yamandulo yindawo entle yokutshona kwelanga okanye ukuphuma kwelanga kwimicimbi yomculo.
11. Indawo yokuhlala yaseMao eShanghai
Ukusuka kwi-elektroniki ukuya kwiingoma zepop, Indawo yokuhlala yaseMao yindawo enkulu yomculo eShanghai. ke, ukuba ufuna ukufumana eyona ndawo intle yobusuku baseShanghai kunye nomculo, emva koko iMao Livehouse yindawo ye-IT yalapha kunye nabakhenkethi.
Indawo yokuhlala yaseMao ineyona nkqubo yesandi ibalaseleyo eTshayina, ukuyenza ibe yeyona ndawo ibalaseleyo yomculo, kunye nendawo yokuyeka iinwele zakho kunye nelitye.
12. Iindawo zeMidlalo eziBalaseleyo kwiLizwe: Ithiyetha yamandulo eorenji, Fransi
Iholo yemidlalo yaseRoma eOrange ibisonwabisa abalandeli bomculo ukusukela kwinkulungwane yokuqala ye-AD. Ifumaneka kwidolophu yaseOrange, iindibano iikonsathi, kunye nomnyhadala waminyaka le weopera opera eFrance.
Unokuba yenye ye 10,000 abantu bonwabele umdlalo womculo ongalibalekiyo kweyona midlalo yeqonga igcinwe kakuhle eYurophu. Iqonga leorenji yi ukukhwela uloliwe kude ukusuka eMarseille, kodwa uhambo olufutshane ngololiwe uya kukusa umva embalini, ukuya kumaxesha amaRoma, kunye nemidlalo yeqonga emnandi kwihlabathi lomculo.
EParis ukuya eMarseilles Kunye noLoliwe
EMarseilles ukuya eParis ngoololiwe
EMarseilles ukuya eClermont Ferrand Kunye noLoliwe
at Gcina A Isitimela, Siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise iholide yakho eyoyikekayo kwi 12 iindawo umculo kakhulu ehlabathini ngololiwe.
Ngaba ufuna ukufaka i-blog yethu iposti "I-12 yeNdawo eziMnandi zeMidlalo eMhlabeni" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-music-venues-world%2F%3Flang%3Dxh‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, kwaye ungatshintsha / ja ukuya / ru okanye / de kunye neelwimi ezininzi.
BestConcertsEurope BestMusicVenuesInTheWorld ikonsathi Ikomdi umculo IiVideos zoMculo